အလုပ်လျှောက်ချင်လို့ပါ - MYSTERY ZILLION
akh.infotech January 2010 edited January 2010 in Job Vacancy အလုပ်တွေကလည်း with experiment ချည်းပဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော့်မှာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာကျွန်တော်က အခုမှ BE.IT ပြီးတာ ဘွဲ့ကလွဲလို့ဘာမှကိုမရှိသေးဘူး ..အလုပ်ကလည်းလိုချင်နေတယ်...ရှိရင်ပြောကြပါဦး (အလုပ်သင်လောက်ကိုပေါ့) ဖြစ်ချင်တာက Java Programmer??? :39:[EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL] မှတ်ချက်များ
challenger220 January 2010 edited January 2010 Registered Users အလုပ်သင် အနေနဲ့ခေါ်တဲ့ Company တွေရှိပါတယ်။ အလုပ်သင်ပြီးရင်တော့ သူတို့ဆီမှာ သုံးနှစ်လုပ်ရမယ်တို့ ဘာတို့ Bond ထိုးရတဲ့ Company တွေရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ အလုပ်လုပ်ရင်း သင်တန်းလေးဘာလေးလဲ တတ်ထားပေါ့။ ဒီလိုပဲ ကျောင်းပြီးခါစမှာ အလုပ်အတွက် ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းအဆင်ပြေသွားမှာပါ။ :) snowprincess January 2010 edited January 2010 Registered Users ဟုတ်တယ် snow လည်းအဲဒီလိုဘဲ အခုမှ computer နဲ.ကျောင်းပြီးတာ။ သူတို.က experience ကြီးဘဲတောင်းနေတာ။ ပြီးတော့ လစာကလည်း နှိမ်ကြသေးတယ်။ အလုပ်သင်လုပ်ချင်တယ်။ graphi designer ကို။ တစ်ကယ်ဖြစ်ချင်တာက professional programmer. rlay January 2010 edited January 2010 Registered Users အလုပ်တွေကတော့ ဒီလိုပါဘဲ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာမှ မဟုတ်ပါဘူး တစ်ခုတော့ရှိတယ် ကိုယ့်တာ၀န်ယူနိုင်ရင်တော့ အလုပ်ရမှာပါ တစ်ခုခုပေါ့ ကိုယ်ဘာကို ပိုင်လည်းအဲ့တာနဲ ့ပက်သက်ပြီးတော့ တာ၀န်ယူနိုင်တယ် ဒီိလိုမျိုးဆိုရင် အလုပ်ရပါတယ် အလုပ်သင်အနေနဲ ့ကတော့ ပိုက်ပိုက်တောင် ရချင်မှ ရမှာ မုန် ့ဖို းလောက်တော့ ပေးမှာပေါ့ဗျာ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုဗျ ဆရာ မရှိဘဲနဲ ့တိုးလို ့မဖြစ်နို်င်ဘူးနော် အဲ့တာ တကယ်ပဲဗျ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းနဲ ့မရဘူး ဆရာရှိမှ ဖြစ်မယ် အဲ့ဒီဆရာကလည်း ကိုယ်နဲ ့ညီအကိုလို ပုံစံမျိုးပေါ့ အဲ့တာဆိုရင် အဆင်ပြေမယ် သင်တန်းချည်းတက်ပြီးတော့ လက်တွေ ့မလုပ်ရရင် မကောင်းဘူးဗျ ကျွန်တော်တို ့လည်း လက်တွေ ့လုပ်နေတာပါ ကိုယ့်အားကိုမကိုးတာ မဟုတ်ဘူး ကိုယ့်မှာဂင် မရှိသေးတော့ ဂင်ရှိအောင်တော့ အရင်လုပ်နေတယ် hipper88 January 2010 edited January 2010 Registered Users snowprincess;68801 said:ဟုတ်တယ် snow လည်းအဲဒီလိုဘဲ အခုမှ computer နဲ.ကျောင်းပြီးတာ။ သူတို.က experience ကြီးဘဲတောင်းနေတာ။ ပြီးတော့ လစာကလည်း နှိမ်ကြသေးတယ်။ အလုပ်သင်လုပ်ချင်တယ်။ graphi designer ကို။ တစ်ကယ်ဖြစ်ချင်တာက professional programmer.
အနော်လဲတူတူပဲ။(ဘ၀တူချင်းမို့ပူးပေါင်းကြည့်တာ စိတ်မဆိုးနဲ့နော်:D)photoshop နဲ့ပတ်သက်တာဆို အလုပ်သင်လုပ်ချင်ပါတယ်။ တကယ်သင်ပေးမယ်ဆို ထမင်းဖိုးနဲ့ ကားခပဲပေးပါခင်ဗျ :)) (ကျွန်နော်က ထမင်းတစ်နေ့ ၅ နပ်စားပါသည်) Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla